ओठ पातलो हुने व्यक्ति हुन्छन् सरल, ठूलो हुने प्रभावशाली: ओठको आकार हेरेर थाहा पाउनुहोस् भाग्य – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > ओठ पातलो हुने व्यक्ति हुन्छन् सरल, ठूलो हुने प्रभावशाली: ओठको आकार हेरेर थाहा पाउनुहोस् भाग्य
admin September 26, 2020 जीवनशैली, रोचक	0
हाम्रो शरीका अंगहरुको आकार हेरेकै भरमा उसको भाग्यका विषयमा थाहा पाउन सकिने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ।हात कान खुट्टाका औंला हस्त रेखा आदि हेरेर फलादेश गरिएझै मानिसहरुको ओठ हेरेर पनि उसको भाग्यका विषयमा सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ।
दुबै ओठ समान र सुन्दर हुने व्यक्ति सत्यप्रिय सुशील तथा सज्जन वृत्तिको हुने गर्दछ । उसले कोमल शब्दले भरिएको मिठो वाणीको प्रयोग गर्दछ । यस्तो व्यक्ति परहितकारी तथा भाग्यशाली जीवन व्यतीत गर्ने हुन्छ ।दुबै ओठ मोटो यस्तो व्यक्ति बढि बोल्ने हुन्छ । उसले अन्तरमनमा कुनैपनि रहस्य लुकाएर राख्न सक्दैन । खानपानमा विशेष रुचि राख्ने हुन्छ । साथै धेरै खाना खाने स्वभावको हुन्छ ।
दुबै ओठ पातलो यस्तो व्यक्ति सरल चित्तको हुने गर्दछ । संघर्षबाट उन्नति गर्ने खालको हुन्छ । बढ्दो उमेरमा हरेक प्रकारको सुख भोग गर्ने हुन्छ ।
माथीको ओठ ठुलो हुने यस्तो व्यक्ति प्रभावशाली हुन्छ स्वादिष्ट भोजनको लालसा राख्दछ र यस्ता व्यक्तिहरू गम्भीर प्रवृत्तिका हुन्छन् ।रक्तिम ओठ हुने शौर्य वीर्य र उत्साहको द्योतक हो यस्तो खालको ओठ । यस्ता स्त्री पुरूषमा काम लालसाको निकै फाइदा उठाउने गर्दछन । उनीहरू ऐश्वर्यशाली तथा धनवान पनि हुन्छन्।
साउन लाग्दैछ, के माछामासु छाड्नैपर्छ? यस्तो छ वास्तविकता! हेर्नुस्